Tsy nanana na inona na inona lasa maherifo nikoizan’ny rehetra · Global Voices teny Malagasy
Tsy nanana na inona na inona lasa maherifo nikoizan'ny rehetra
“Mbola tantara tsara kokoa sy azo inoana kokoa noho ny Black Panther,”
Voadika ny 02 Jona 2018 11:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, 繁體中文, 简体中文, русский, Español, Italiano, Português, ਪੰਜਾਬੀ, polski, Deutsch, Swahili, नेपाली, Ελληνικά, English
Sary nataon'ny mpanoratra. Nahazoana alalana.
Toy ny ankizy mamaky ny boky tantara an-tsary DC sy Marvel tamin'ny dikanteny Arabo tany Sodana, dia nino aho fa nisy ny maherifo ikoizana [superheroes]. Saingy tsy takatro hoe nahoana no tsy nisy tahaka ahy ireo maherifo ikoizana [superheroes] ireo na nanana tantara izay tian'ny olona tahaka ahy hotantaraina. Angamba izany no antony nanapahako hevitra ho lasa mpanao tantara an-tsary?
Nitsikafona ny fahatsapako ny fahazazako rehetra omaly tao amin'ny Twitter rehefa nahita ny lahatsary niparitaka be iray aho izay nahitana lehilahy iray nihanika tamin-kitsimpo ny tranobe iray misy rihana efatra tao anatin'ny 20 segondra monja mba hamonjy ny zaza iray, nomena ny tenirohy hoe #ParisSpiderman.
Nanome ahy sombiny sy ampahany tamin'ny fampahafantarana ny mari-panondroana miafina momba an'ity #ParisSpiderman mistery ity ny famahanako ny Twitter-ko, avy eo nameno ny fahana Twitter-ko izany. Mamoudou Gassama no anarany ary mpifindra monina tsy manana taratasy avy any Mali izy. Hoy aho hoe “Mbola tantara tsara kokoa sy azo inoana kokoa noho ny Black Panther,” hoy aho an'eritreritra.
Raha nanavao ny pejin'ny tenirohy aho mba hahatongavana amin'ny tantara voalohan'ity maherifo ity, dia gaga aho fa tsy voalaza tao ny fivavahany, satria matetika izany no famaritana voalohany asongadina amin'ny lohateny sy ny tenirohy rehefa manao zavatra ratsy ny mpifindra monina.
Tao anatin'ny ora vitsivitsy, nitatitra ny lohatenim-baovao fa nasaina hihaona tamin'ny filoha Frantsay i #ParisSpiderman ary homena zom-pirenena izy. Karazandrazan'ny [zero lasa hero] tsy manana na inona na inona lasa maherifo ao amin'ny tantaran'ireny maherifo ikoizana [superhero] ireny. Na dia tsy fantatra loatra aza ny mikasika ny tantarany dia efa nanasongadina ny fiheveran-diso (mainty, mitolona, fahantrana, fonenana tsizarizary) izany, ahitana horonana mandeha haingana misy maherifo iray ambany noho ny alika namonjy zazalahy kely ampahibemaso— ary POW!—fampidirana maherifo vaovao [avy] amin'ny “vitsy an'isa”, fanampiny vaovao amin'ireo maherifo fotsy hoditra ny ankamaroany.
Indro ny tantara tsy voalaza teo aloha: nandao an'i Mali i Gassama raha mbola zatovo ary nanavatsava an'i [Burkina Faso], Libya—nahatrarana sy nidarohana azy—tany amorontsiraka nandraisany sambo amin'ny dia mampidi-doza ho any Italia. Nijanona nandritra ny efa-taona tany Italia izy talohan'ny nahatongavany tany Frantsa tamin'ny volana Septambra 2017 mba ho any amin'ny rahalahiny. Koa satria tsy nanana taratasy fahazoan-dalana hijanona any Frantsa izy, dia natory tamin'ny trano fonenan'ny mpifindra monina any Montreuil, ivelan'i Paris izy, ary mamelatra kidoro isaky ny alina amin'ny tany sy mamalona izany indray ny maraina. Efitrano kely no izarany miaraka amin'ny olona miisa enina hafa ary mazava ho azy fa tsy afaka niasa ara-dalàna izy.
Inoana fa anisan'ny mora indrindra tamin'ny zavatra efa fanaon'i Mamoudou nandritra ny taona maro ny fianihana ity tranobe ity.
Ny zavatra tokony ho tsapan'ny mpamaky sy ny zavatra tokony hataon'ireo mpitantara amin'ny fomba hafa amin'ity fotoana ity dia ny manasongadina amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny fiainan'ity maherifo ity sy ireo zava-tsarotra tsy maintsy niaretany talohan'ny nihanihany ity tranobe ity ka namonjena ilay zaza. Mpifindra monina i Superman, ilay lehibe indrindra amin'ireo maherifo ikoizana [superheroes], saingy ilay “karazany tsara ” izy, ilay karazana “araka ny izy” ary mety tsara amin'izany, ary tsy voatazona na naraha-maso kisendrasendra.
Aleo ny fampidirana ity maherifo ikoizana [superhero] vaovao sady hafa ity mba hahatonga an'i Frantsa, sy ny sisa amin'izao tontolo izao, hahatsikaritra fa maro ireo maherifo ikoizana [superheroes] tonga ao anatin'ireo sambo ireo ary mbola miandry ny hampidirana azy ireo an-tsehatra ihany koa.
Olana manaraka: Moa ve ity maherifonintsika ity hahavita hiatrika ny fahombiazany nandritra ny dimy minitra? Ahoana no fomba hiatrehany izany amin'izao fotoana rehefa fantatra ny heriny?
17 ora izayAngola
6 andro izayEtiopia
1 herinandro izayMediam-bahoaka